Suzhou Optimal Makiinado Co., Ltd. (OPTFAN), oo la aasaasay 2007, ayaa door hoggaamineed ka ciyaaraysa HVLS (Volume-Sare, Xawaare-Xawaare Sare) warshadaha taageerayaasha ee Shiinaha. Hogaamiye hore ee taageerayaasha HVLS, OPT waxay soo saartay jiilkeedii ugu horreeyay ee "HVLS taageerayaasha warshadaha" 2007. Waxay u heellan yihiin inay ikhtiraacaan HVLS hufnaan hufan leh oo loogu talagalay qaboojinta iyo hawo bannaan oo ballaaran.
OPT waxay fiiro gaar ah siineysaa tayada, farsamada gacanta iyo hal-abuurka taageerayaasha HVLS si ay u naqshadeeyaan alaabooyin u gaar ah oo leh waxqabad wanaagsan. Weligood ma aysan joojin cilmi baarista iyo horumarinta marka laga hadlayo injineernimada iyo horumarinta wax soo saarka. 13 Sano oo keliya oo loogu talagalay taageerayaasha HVLS, waxay u adeegtay in ka badan 5000 macaamiisha suuqa gudaha, in ka badan 300 oo iyaga ka mid ahi waa kuwa ugu sarreeya adduunka 500 shirkadood. Suuqa dibada, OPTFAN waxay u dhoofisay Canada, Mareykanka, Mexico, Japan, Australia iyo 30 dal oo kale.
Waqtigan xaadirka ah, OPTFAN waa mid ka mid ah soosaarayaasha xirfadleyda ah ee ku yar taageerayaasha warshadaha HVLS oo ay weheliyaan kooxda R & D, soosaarida, la tashiga barnaamijka, rakibaadda, iibinta iyo adeegga iibka kadib mid ahaan. Waxay leedahay kooxda ugu khibradda badan ee bixisa adeeg hal-joogsi ah.Taageerayaasha OPT had iyo jeer waxay u qaataan "amniga sida tikniyoolajiyadda udubdhexaadka ah, baahida macaamiisha ee ku wajahan hal-abuurnimada, macaamilka macaamil ahaan bartilmaameedka, kharash-ku-oolnimada loogu talagalay raadinta kama dambaysta ah" iyada oo ujeedadu tahay in loogu adeego macaamiisha adduunka.
OPT waxay ku guuleysatay wax soo saar dheeri ah oo leh xoog faras yar iyada oo la baabi'inayo aaladaha dhaqameed iyadoo la adeegsanayo naqshad gaar ah oo loogu talagalay OPT-Germany Nord motor reducer. Adoo yareynaya tirada guud ee garbaha isla markaana adeegsanaya tayo sare leh aluminium duulista hawada sare ah iyo hawo qaas ah oo loogu talagalay, taageerayaasha OPT waxay ilaa 50% ka waxtar badan yihiin taageerayaasha kale ee HVLS, iyagoo u oggolaanaya dhaqdhaqaaqa hawada baahsan, kharashka hawlgalka oo hooseeya iyo keydka sanadka oo dhan. Shirkadda ugu fiicani waxay xoogga saartaa faahfaahinta, waxay ku dadaaleysaa inay si kaamil ah u siiso macaamiisha qiimaha ugu hooseeya ee lahaanshaha iyo waxtarka ugu sarreeya iyo kalsoonida alaabta iyo adeegga.
1. KQ Taxanaha HVLS Taageerayaasha Saqafada Warshadaha (6 blades)
2. Navigator Series-PMSM Taageerayaasha Saqafka Motor
3. Taageerayaasha Ganacsiga ee Superwing Taxanaha-PMSM
4. Taxanaha Diyaaradda - Mobile HVLS Taageerayaasha
Tiknoolajiyada ugu fiican waa aasaaskayaga, adeegga tayada leh waa halbowlaha nolosheena, amniga la sugay ayaa ah udub-dhexaadkayaga.
Shirkadeena waxay leedahay 2 shati abuuris, 8 nashqad muuqaal muuqaal adeegsi ah.
Dhammaan alaabooyinka iyada oo loo marayo AQSIQ, CQC, Boqortooyada Ingiriiska GLC iyo Yurub CE, shahaadada u hoggaansamida shirkadda SCS, Qaybaha illaa CE, UL Europe, PSE iyo shahaadada heerka Mareykanka. Shirkaddayadu waxay heshay shahaadooyin ISO9001: 2008.
Sanadihii la soo dhaafay, optfans ayaa la siiyay: Shahaadooyinka ISO9001: 2008, Shiinaha ee e-commerce logistics ugu fiican tiknoolajiyada iyo shirkadda qalabka, Suzhou City ururada warshadaha kaarboon-yar, adeegga tayada leh Gobolka Jiangsu AAA-heer sare, shirkadaha tiknoolajiyadda sare ee Suzhou iyo sharaf kale.
Hoosudhaca horukaca ee soosaarida alaabada isdabajooga, oo leh ilaalin badan oo deegaanka ah & hawo qaboojineed oo hogaamiya shirkadaha wada shaqeeya si ay uqortaan bog cusub oo ku saabsan badbaadinta tamarta